किशोर नेपाल र मेरो संगत
'कैलालीमा सिडियो बस्दैनन् र ?' गोरखापत्रको कैलाली समाचारदाता नियुक्तीका निवेदनसहित पुग्दा प्रधानसम्पादक किशोर नेपालले भन्नुभएको यो शब्द अहिलेसम्म कानमा गुञ्जिन्छ । निवेदनसहित गएको मैले 'कैलालीमा खाली छ सर मलाई राख्नु पर्यो' भन्दा उहाँले 'सिडियो बस्दैनन् र ?' भन्नु भएको थियो । उहाँको पत्रकारिताको उचाइ देखेर प्रभावित मलाई उहाँका अगाडि कसरी कुरा गर्ने भन्ने डर लागेको थियो । त्यसैमा उहाँको जवाफले सायद म झन डराएको थिएँ।""
पर्यावरणको पक्षमा एउटा अर्को शक्तिशाली परमादेश
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले समृद्धिको कायाकल्प गर्ने भन्दै केही दल र तिनका नेतागणले प्रचार गरेको निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दियो । यो आदेशको महत्व केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको राजनीतिक परमादेशकै हैसियत, तह र महत्वको थियो । विकासको नाममा मच्चाइएको स्वैरकल्पना र फैलाइएको अतिशयोक्तिपूर्ण हौवालाई सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुले पहिचान गरेर जुन आदेश दिए त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति आउने क्रम जारी छ ।
चिसो मरुभूमिको फरक भूखण्ड, प्राकृतिक विविधता र लोभलाग्दो संस्कृति भएको मुस्ताङ सिंहदरबारबाट धेरै टाढा होइन । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्बतसँग साँध जोडिएको यो जिल्ला अन्यभन्दा फरक छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा आगामी निर्वाचनको गर्मागर्मी शुरु भए पनि यहाँका गाउँमा पर्यटन गतिविधि र स्याउको गोडमेलले प्राथमिकता पाएको छ । कोरोना महामारीले सुस्ताएको मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा चहलपहल बढेको छ ।
लोमान्थाङमा अशान्तिका तरंगहरु
बितेका दुई बर्ष शान्त र स्थीर रहेको जोमसोम बजार फागुन महिनाको आधाआधीदेखि तरङिगत हुन थालेको छ । अहिले कोरोनाको त्रास घटेका छ । साथसाथै, जाडोपनि घटने क्रममा छ ।""
एनआरएनएको चुनाव लडेर के फाइदा ?
उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलाई मेरो एउटा साधारण प्रश्न छ। संसारभरिका मान्छे संसारभरी छरिएका छन्। एनआरएनको मात्र यत्रो कोकोहोलो किन ? तपाईंहरुले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसक्नुभयो। अब नेपाली समुदाय फ़ुटाएको किन ? उपेन्द्र महतो गुपचुप आफ्नो काम गर्छन। जीवा लामिछाने त किताब लेख्छन पनि। उनलाई अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुराको ख्याल होला। एनआरएन नामको बिउ रोपेर तपाईंहरुले जे गर्नुभो त्यो गर्नुभो त्यो बेला तपाईंहरुकै थियो। अब त्यो छैन।"